TOEFL Exam အကြောင်း - Myanmar Network
TOEFL Exam အကြောင်း
Posted by Gam Shawng on February 24, 2014 at 17:08 in General Chit Chat (ရောက်တတ်ရာရာ)
ွှTOEFL EXAM နှင့် ပါတ်သက်၍ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ သိလိုပါသည်။
1- ယခုနှစ် ၂၀၁၄ တွင် TOEFL EXAM dates in Myanmar ကို သိလိုပါသည်
2- စာမေးပွဲဖြေဆိုပြီး ဘယ်နှစ်ရက် အကြာတွင် စာမေးပွဲ result ထုတ်ပြန်ပါသလဲ။
၃- TOEFL TEST CENTER in Yangon ဘယ်နေတွေမှာ ဖြေဆိုနိုင်ပါသလဲ။ ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ။
၄- TOEFL iBT မြန်မာပြည်မာ ဖြေလို့ရပြီလား။
၅- TOEFL Preparation Course သင်တန်းကောင်းကောင်း၊ ဆရာကောင်းကောင်းများရှိလျင် သိလိုပါသည်
( ကိုယ်တိုင်လည်း လေ့လာ၊လေ့ကျင့်နေပါသည် )
၆- TOEFL Exam Fee
၇- IELTS Certificate သက်တမ်းက ၂ နှစ်ဆိုတော့ TOEFL certificate သက်တမ်းက ဘယ်နှစ်နှစ် ပါလဲ။
၈။ TOEFL ဖြေဆိုလျင် DO AND DON'T ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်များကို သိလိုပါသည်။
၉။ TOEFL ဖြေရန်အတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် လိုအပ်ချက်များ (Requirements)
၁၀။ TOEFL EXAM မှာ iBT, CBT, PBT ဆိုပြီး သုံးမျိုးရှိတဲ့အထဲက ဘယ်ဟာပဲဖြေဖြေ ပြည်ပတက္ကသိုလ်များက သုံးမျိုးစလုံးကို လက်ခံပါသလား။
Member များတစ်ယောက်တစ်ယောက်က TOEFL ဖြေဖူးသည်ဆိုလျင်
Permalink Reply by Nyein Wai Phyo on May 12, 2014 at 12:36
You should check in the www.ets.org and I'm sure you can get more information about Toefl.As far as I know,the registration fees is about 160$ and you can purchase both online and at Grace education. For more information, you'd better check that I mentioned above.
Permalink Reply by Mawite on June 26, 2015 at 20:50
I want to attend TOEFL course but I don't know location where can I attend. Please could you tell me the place where can I attend these course. I am living in North Dagon, Yangon.
Permalink Reply by wakaman123fdr on October 15, 2018 at 7:55
Permalink Reply by Phoo WaiLynn on June 11, 2019 at 17:17
I want and love to buy certificates. I hate to work hard for exams with my own endeavor.